Tọghata US dollar Ka Nigerian naira
UN mgbanwe udu data na 11/04/2021 09:48
US dollar Ka Nigerian naira ntụgharị. US dollar ego na Nigerian naira taa na ahia ahia ego.
1 US dollar = 381 Nigerian naira
Mgbanwe mgbanwe ọnụego nke US dollar ka Nigerian naira pụtara otu ugboro kwa ụbọchị. Ọnụ ahịa mgbanwe ego na-enwe ọnụ ahịa kwa ụbọchị. Anoghi n'ulo oba na etinye aka na nyefe nke US dollar n'ime Nigerian naira. 1 US dollar bụ 381 Nigerian naira. 1 US dollar wee site na 0 Nigerian naira. US dollar na-akwụ ụgwọ taa 381 Nigerian naira.
Ọnụego mgbanwe US dollar Ka Nigerian naira
Izu ole na ole gara aga, enwere ike ịzụta US dollar maka 407.85 Nigerian naira. Ọnwa isii gara aga, enwere ike ịgbanwere US dollar maka 384.81 Nigerian naira. Afọ ise gara aga, a ga-erere US dollar maka 203.36 Nigerian naira. Chaatị nke ọnụego mgbanwe dị na peeji a. -6.58% - mgbanwe na ọnụego mgbanwe nke US dollar ka Nigerian naira kwa izu. 0.25% kwa afọ - ngbanwe nke ọnụego mgbanwe nke US dollar.
Ọnụego mgbanwe US dollar (USD) Ka Nigerian naira (NGN) Na-na Forex mgbanwe ahịa
Converter ego US dollar Nigerian naira
US dollar (USD) Ka Nigerian naira (NGN)
1 US dollar 381 Nigerian naira
5 US dollar 1 905 Nigerian naira
10 US dollar 3 810 Nigerian naira
25 US dollar 9 525 Nigerian naira
50 US dollar 19 050 Nigerian naira
100 US dollar 38 100 Nigerian naira
250 US dollar 95 250 Nigerian naira
500 US dollar 190 500 Nigerian naira
You nwere ike ree 3 810 Nigerian naira maka 10 US dollar . Taa, enwere ike ịgbanwere 9 525 Nigerian naira maka 25 US dollar. Taa, enwere ike ịzụta 50 US dollar maka 19 050 Nigerian naira. Taa 38 100 NGN = 100 USD. Ihe ntụgharị ego na-enyezi 95 250 Nigerian naira maka 250 US dollar. Taa, enwere ike ịgbanwere 190 500 Nigerian naira maka 500 US dollar.
US dollar Ka Nigerian naira Ọnụego mgbanwe
US dollar Ka Nigerian naira taa na 11 April 2021
11.04.2021 379.797593 -27.322251 ↓
10.04.2021 407.119844 -0.590765 ↓
09.04.2021 407.710609 -5.012899 ↓
08.04.2021 412.723508 9.133533 ↑
07.04.2021 403.589976 -4.093056 ↓
Taa 379.797593 NGN = 500 USD. US dollar ka Nigerian naira na 10 April 2021 - 407.119844 Nigerian naira. 9 April 2021, 1 US dollar = 407.710609 Nigerian naira. Oke USD / NGN ọnụego na nọ na 08.04.2021. Opekata mpe US dollar na Nigerian naira ọnụego maka ọnwa gara aga dị na klas 11.04.2021.
US dollar Ka Nigerian naira ọnụego mgbanwe n'akụkọ ihe mere eme
US dollar na Nigerian naira akara ego na mba
US dollar akara ngosi ego, US dollar ego akara: $. US dollar State: British Virgin Islands, British Indian Ocean Territory, East Timor, nke Marshall Islands, Micronesia, Palau, na Northern Mariana Islands, USA, na Turks and Caicos Islands, Ecuador. US dollar koodu ego USD. US dollar Mkpụrụ ego: pasent.